Waltajjiin marii misooma qonna Oromiyaa hammayyeessuufi ceesisuurratti xiyyeeffate Finfinneetti taa’amaa jira - | - OBN
Waltajjiin marii misooma qonna Oromiyaa hammayyeessuufi ceesisuurratti xiyyeeffate Finfinneetti taa’amaa jira
OBN Caamsaa 01, 2011- Waltaajjiin marii misooma qonna Oromiyaa hammayyeessu fi ceesisuurratti xiyyeeffatee Finfinneetti taa'aamaa jira.
Waltajji marii kanarratti Pireezidaantii Itti Aanaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa dabalatee hayyoonni fi dhimmamtoonni irratti hirmaachaa jiru.
Ministirri Qonnaa Obbo Uumar Huseenis maricharratti argamaniru.
Hogganaan Biiroo Qonnaa fi Qabeenya Uumamaa Oromiyaa Obbo Dhaabaa Dabalee, waltajjichi misooma qonnaa naannichaa hammayyeessu fi ceesisuurratti xiyyeeffate kana irraa yaadaa fi beekumsa galtee tahu argachuuf kan kaayyeefate dha jedhan.
Waltajjii tooftaa qonnaa ammayyeessuufi ceesisuurratti xiyyeeffate kanarratti hayyoonni qorannoowwan adda addaa dhiyeessaniiru.
Daareektarri Olaanaa Inistiituyitii Qorannoo Qonnaa Oromiyaa Dr. Fatoo Ismoo haala waliigalaa tiraanisfoormeeshinii qonna Oromiyaa ilaalchisee mata duree "Introdduction of Agriculural transformation in Oromia" jedhu dhiyeessaniiru.
Dr Fatoo akka jedhanitti haala barame keessaa bahuun karaa haaraan yoo deemame malee uummata naannichaa hiyyummaa keessaa baasuu hin dandeenyu jedhan.
Haala misoomni qonnaa naannichaa keessa jiru qorachuun adda baasuun karaa ammayyaa'aa ta'een tarkaanfachuun murteessaadha jedhaniiru.
Qonna ceesisuuf yoo hojjennu karaa bittinnaa'aa ta'een qorannoo qorachuun qonnaan bulaatti gadi buusuun bu'aa akka hin argamsiifne himuun, karaa qindaa'aa ta'een dhimmamtootaafi hayyoota hunda hirmaachisuun qorannoo gaggeessuun gara hojiitti galuun barbaachisaa akka ta'es Dr. Fatoon himaniiru.
Bu'uuruma kanaan Kaawunsilii tiraansfoormeeshinii qonnaa hundeessun karaa qindaa'ee haala qonna biyyatti qorachuun uummata hiyyuummaa keessaa baasuun biyyatti gama diinagdeen ceesisuuf hojjetamaa jira jedhan.
Pirojektiin kun waggaa shaniif kan turu ta'uusaa kan himan Dr Fatoon yeroo gabaabaa keessatti gara hojii qabatamaatti kan galamu ta'uusaas himaniiru.
Waltajji Kanaan hojii misooma qonnaa kana haala hammayyeessun danda'amuurratti Pireezidaanti Itti Aanaan MNO obbo Shimallis Abdisaa kallatti fuulduraa I kaa'uu jedhamee eegama.
329 Views 5/9/19